Mobile Reviews: Samsung Galaxy S4 – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Beat the Boss2(17 ) v1.6 Apk Game (42.28 Mb) The Pirate Bay Browser Premium v5.4.3 Apk (2.52 Mb) iExplorer 3.2.1.4 For Mac Os X 16.5 MB Tower Defense 1.3.5 Game For Mac Os X 30MB ImTOO iPhone Apps Transfer 1.3.1 For Pc Home
Published On: Fri, Mar 15th, 2013 mobile reviews | By သက်နိုင်စိုး Mobile Reviews: Samsung Galaxy S4
15.3.2013 ရက်နေ့မှာ Samsung က Galaxy နောက်ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy S4 ကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပါပြီ။ Samsung Galaxy S4 ရဲ့ဒီဇိုင်းဟာအရင် Samsung Galaxy S3 နဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံသိသိသာသာကြီးပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘဲ အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲထားပါတယ် ။
Samsung Galaxy S4 ရဲ့ Operating System အနေနဲ့ Android 4.2.2 ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့မှန်သားပြင်ကို အပွန်းအစင်းဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ Gorilla Glass3ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ ဖုန်း Screen အနေနဲ့ Super AMOLED touch Screen ကိုအသုံးပြုထားပြီး 1080 x 1920 pixels အထိပုံဖော်ပေးနိုင်တာကြောင့် ရုပ်ထွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ဆိုရမှာပါ။ ဖုန်းရဲ့ Screen Size ကတော့5လက်မပါ။ ဖုန်းမှာသိသိသာသာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေတဲ့ Hardware သုံးမျိုးကိုလည်းတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Ram က 2GB ဖြစ်ပြီး Exynos5Octa 5410, Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 နဲ့ ဖုန်းရဲ့ graphic processing ပိုင်းကို speed မြှင့်တင်ပေးမယ့် PowerVR SGX 544MP3 တို့ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာ Samsung Galaxy S4 မှာပထမဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Smart Stay Eye Tracking System လည်းပါဝင်ပါတယ်။ Camera ကလည်းလုံးဝအလန်းပါ။ ရှေ့ကင်မရာက2Mega Pixel နဲ့နောက်ကင်မရာက 13 Mega Pixel ရှိပါတယ်။ ဖုန်းကို 16GB/ 32GB / 64GB Storage သုံးမျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အရောင်အနေနဲ့ကတော့ အဖြူရောင်နဲ့အနက်ရောင်နှစ်မျိုးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဧပြီလမှာစတင်ဖြန့်ချီမှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းအသေးစိတ်ကိုတော့ပြောကြားထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဖုန်းရဲ့ detail အသေးစိတ်ကိုအောက်မှာဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
1080 x 1920 pixels, 4.99 inches (~441 ppi pixel density)
Mobile Reviews : HTC First
Mobile Reviews: Sony Xperia SP
Mobile Review: RugGear Explorer P860
Mobile Reviews: LG optimus G Pro
16 comments on “Mobile Reviews: Samsung Galaxy S4”	Aung on March 15, 2013 at 2:23 am said:
Reply ↓	wanna kyaw on March 16, 2013 at 3:10 pm said:
Reply ↓	zaw myo oo on March 15, 2013 at 3:52 am said:
Reply ↓	Thet Naing on March 15, 2013 at 9:39 am said:
ဘာဘဲ ဖြစ် ဖြစ် samsung so ကြိုက်ပြီးသားပါ
But,note series ကိုပို ကြိုက်တယ်
S pen က အရမ်းမိုက်တယ်လေ
Reply ↓	chan aye han on March 15, 2013 at 11:03 am said:
battery က 3600 mAh ပါ မှားနေပါတယ်
Reply ↓	prepix on March 16, 2013 at 11:01 pm said:
No,it’s justa2600 mAh battery.
Reply ↓	ko lay on March 16, 2013 at 4:44 am said:
bar phit phit, ma wal nine tay pa, price ka moe ti yout nay mar.
Reply ↓	Lin on March 17, 2013 at 3:24 am said:
I heard that it may be around $750.
Reply ↓	ိdata kyaw swer on March 17, 2013 at 8:19 am said:
Reply ↓	naylinn on April 25, 2013 at 5:32 pm said:
S$ 900++ lout shi mal htin tar pal
Reply ↓	heinlinntun on March 17, 2013 at 8:56 am said:
Very good S4
Reply ↓	K T P Y M N on March 19, 2013 at 4:13 am said:
Reply ↓	u myint on March 24, 2013 at 3:11 am said:
Reply ↓	anhmawoo on March 31, 2013 at 12:01 pm said:
Reply ↓	Zzzz on April 19, 2013 at 3:05 pm said:
ဘယ်ဈေးလောက်ရှိ မ လဲ။
Reply ↓	thettin on April 22, 2013 at 9:36 am said:
note2 ဝယ်ထားပြီးပြီဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ဝယ်မလဲ သူတို့ထုပ်တိုင်းတာ ဝယ်နေရရင်တော့
မလွယ်ဘူး ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နိုင်အောင်ပဲကြိုးစားတော့မယ် ဟဲဟ
Zom Seng Khae on SRS Root -One Click Root tool (Support Android version 1.5 to 4.2)Zom Seng Khae on SRS Root -One Click Root tool (Support Android version 1.5 to 4.2)linx on Wondershare MobileGo for Android 3.2.0 For Pc 25.49 MBDe Hlainglay on i-mobile i693 ကို Root လုပ်ပြီး Fontchanger နဲ့ မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်းMr on How to Install Myanmar Font On Samsung Galaxy S4-i9500 & i9505-(Without Rooting) Android Development